राजनीतिमा कला पुर्‍याएर पार्टी एकता सफल – प्रचण्ड::Online News Portal from State No. 4
राजनीतिमा कला पुर्‍याएर पार्टी एकता सफल – प्रचण्ड
पार्टी एकता बडो धुमधामले सफल
पोखरा, १९ जेठ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिमा कला पुर्‍याएर नै पार्टी एकता बडो धुमधामले सफल बनाएको बताएका छन्। कास्की जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिका पार्टी कमिटीद्वारा आयोजित भेटघाट तथा स्वागत कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
‘हल्ला भएको दिन एकता हुँदैन भनेको थिएँ। जुन दिन हल्ला हुँदैन त्यही दिन पार्टी एकता हुन्छ। पत्रपत्रिकाले प्रचार नगरेको दिन पार्टी एकता हुन्छ त्यो भनाइभित्र एउटा मर्म थियो,’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने,‘हल्ला गरेका दिनमा अनेक खालका षडयन्त्र हुन्थे । त्यसकारण थाहा नभएको दिन हुँदैन हुँदैन भन्नेजस्तो बनाएर झ्याप्पै हान्नुपर्ने वाला थियो स्थिति। हुन्छ हुन्छ भन्ने स्थिति देखाको भएत पुरै तागत लगाएर झमेला गर्नेवाला थिए। हुँदैन जस्तो क्यारे भन्न दिएर ए अब नहुनी भयो क्यारे यिनीहरूको त भन्ने बनाएर अनि ड्यांगै एकता घोषणा गर्ने स्थिति थियो। हामीले त्यसरी नै गरेका हौं।’
पार्टी एकता विषयमा छलफल भएका कुरालाई स्मरण गर्दै दाहालले भने ‘२ गतेका दिन बिहान म र ओलीजीबीच बालुवाटार भेट गरेपछि ढिला नगर्ने कुरा भयो। ‘७ गते नीति तथा कार्यक्रमभन्दा अघि नै गर्ने भन्नु भा’को थियो। मैले ३ गते मदन आश्रित सम्मानको अवसर पारेर एकता गर्ने भने। कुरा पनि मिल्यो। त्यति बेला कोही जाली फटाहा प्रतिक्रियावादीले दिमागमा सोचेका थिएनन् कि पार्टी एकता ३ गते नै हुन्छ भनेर। यसरी पार्टी एकता बडो धुमधामले सफल बनायौं।’
उनले अघि थपे, ‘राजनीति कस्तो हुँदो रहेछ भने कहिलेकाही चीजहरू विपक्षीसँग वा प्रतिक्रियावादीसँगको लडाइमा उनीहरूसँगको संघर्षमा हामीले कला पुर्‍याउन जानेनौं, हामीले बुद्धि पुर्‍याउन जानेनौं भने पनि हामी सही भएर पनि सफल नहुने खतरा हुने रहेछ। कला मिलायौं भने ठूल्ठूला प्रतिक्रियवादीलाई सजिलै परास्त गर्न सक्छौं र यसमा हामी सफल पनि भयौं।’
उनले हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट सम्मेलनबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको बताए। छिमेकी नेताहरूको अभिव्यक्ति सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए। ‘कहिलेकाही कस्तो लाग्छ भने तपाई हामी त कर्ता भयौं। कर्तालाई आफूले गरेको कर्म ठूलो सानो कति हो ? त्यति धेरै हेक्का हुँदैन। कति ठूलो हो भन्ने? हेक्का खेलाडीलाई भन्दा दर्शकलाई हुँदो रहेछ। राम्रो खेल्यो कि नराम्रो खेल्यो भन्नेबारे दर्शकले मुल्याकंन गर्दा रहेछन्,’ उनले भने, ‘चीन, भारतदेखि बाज्रिल अफ्रिकाका नेताहरूले पार्टी एकताले खाली नेपालको राष्ट्रमा मात्र दूरगामी असर नपुर्याइ, विश्वभरी प्रभाव पारेको र यसले थप एउटा नयाँ उत्साह फेरि एकचोटी पैदा भएको बताए।’